8:52 am, बुधबार, माघ २६, २०७८
काठमाडौं । विश्व अटोमोबाइल बजारमा इलेक्ट्रीक भेहिकलको माग तिब्र गतिमा बढी रहेको छ । सन् २०४० र ५० लाई अधिकांश देशले सून्य प्रदुषणमा झार्ने योजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य बनाएका छन् ।
सरकारले नै सवारीसाधनको प्रदुषण सून्यमा झार्ने योजना अगाडि सारेसँगै विद्युतीय गाडीलाई भन्सार छुट, प्रोहोत्साहन बापत रकम र आवश्यक पूवार्धार निर्माणमा लगानी गरिरहेका छन् ।
विद्युतीय गाडीसँगै विकास भएको अटोनोमस प्रविधिले अहिले धेरै कार निर्मातालाई आकर्षित गरिरहेको छ । कारमा चालक भूमिका घटाउँदै सवारी साधनले नै बाहिरी मौशम, आन्तरिक वातावरण, ट्राफिक, रोड कन्डिसन जस्ता विषयलाई अध्ययन गरेर बाटोमा सवारी चल्ने प्रविधि विकास गरेका छन् । यसलाई नै अटोनोमस प्रविधि भनिन्छ ।
धेरै कम्पनीहरुले यसलाई आर्टिफिसीयल इन्टेलीजेन्स भनेका छन् । भारतमा निर्मित कारहरु महिन्द्रा एक्सयूभी ७००, एमजीको एस्टर लगायतका गाडीमा पनि सामान्य अटोनोमस प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ । यी दुबै गाडी निकट भविष्यमा नै नेपाल आउने छन् ।
के हो अटोनोमस भेहिकल ?
मानविय सहायता विनानै आफैँ वातावरणलाई अनुभव गरेर संचालन हुने सवारी साधन अटोनोमस भेहिकल हो । यो प्रविधिको उच्चम लेभल जडान भएको सवारी साधनमा चालकको रुपमा मानिसको आवश्यकता पर्दैन । यो सवारी चलाउन मानिस गाडी भित्र हुन आवश्यक पर्दैन ।
अटोनोमस भेहिकलको वर्गिकरण
सोसाइटी अफ अटोमोटिभ इन्जिनियर्स (एसएइ) का अनुसार अटोनोमस भेहिकलमा ६ लेवल हुन्छ । यसलाई ० वाट ५ सम्म क्रमानुसार गरिएको छ ।
शून्य लेभलको अटोनोमीमा ड्राइभिङमा अटोमेसन हुँदैन । अर्थात् चालक नै गाडीमा हुने सबै एक्सनको जिम्वेवार हुन्छन् ।
फस्ट लेभल अटोनोमी
चालकलाई राम्रो र सुरक्षित गाडी चलाउन सघाउने एसिस्ट सिस्टम भएको गाडी फस्ट लेभल अटोनोमी हो । सवारी साधनमा भएको एड्भान्स ड्राइभर असिस्ट सिस्टम (एडिएएस) ले चालकलाई राम्रोसँग सवारी चलाउन मद्दत गर्छ ।
यो सिस्टमले चालकलाई स्टेरिङ कन्ट्राल गरेर, अचानक ब्रेक लगाएर वा एक्सलीरेसन बढाउन सहयोग गर्छ । यो लेभलको अटोनोमीले एक पटकमा एउटा मात्रै काम गर्न सहयोग गर्छ ।
यो लेभलमा एडिएएसले एकैसमया स्टेरिङ, ब्रक्रिङ र एक्सीलरेसन कन्ट्रोल गर्छ । चालकले सवारी चलाउदा यी बाहेक अन्य ड्राइभिङ डिउटीमा पूर्णतया कन्सन्ट्रेसन भने गर्नु पर्छ ।
लेभल तीन अटोनोमी
यो लेभल भएको गाडीमा कुनै निस्चित कन्डिसनमा सिस्टमले ड्राइभिङ टास्कको सम्पूर्ण कार्य गर्न सक्छ । यो अवस्थामा चालक भने हसहमेसा कन्ट्रोल व्याक लिन तैयार हुनु पर्छ । लेभल ३ को अटोनोमीमा हरेक अवस्थामा मानविय चालक नै ड्राइभिङ इन्चार्ज हुन्छ ।
यो लेभलको अटोनोमीमा कुनै निश्चीत परिस्थितिमा अटोनोमीक ड्राइभिङ सिस्टम (एडिएस) ले वाहिरी वातावरणको पूर्ण मूल्यांकन गरी सम्पूर्ण रुपमा आफै ड्राइभिङ गर्छ । यो लेवलको अटोनोमी भएका गाडीमा मानविय चालकले सवारी साधनमा ध्याननै दिनु पर्दैन ।
लेभल ५ अटोनोमी
यो लेभलको अटोनोमीलाई फुल ड्राइभिङ अटोमेसन भनिन्छ । यो लेवलमा सबै परिस्थितिमा एडिएस सिस्टमले गाडी संचालनको सबै काम कन्ट्रोल गर्छ । यो लेभलमा मानिस यात्रुको रुपमा मात्रै हुन्छ ।
अहिलेसम्म कुल लेभलको गाडी पाइन्छ ?
अहिलेसम्म बजारमा उपलब्ध प्यासेन्जर गाडीहरुमा लेभल २ सम्मको अटोनोमस प्रविधि रहेको छ । टेस्लाको अटोपाइलट, जनरल मोटर्सको सुपरक्रुज तथा निसानको प्रोपाइलट लेभल २ अटोनोमस ड्राइभिङका उदाहरण हुन् ।
मर्सिडिज बेन्जले हालै मात्र युनाइटेड नेसन रेगुलेसन अर्थुरिटीबाट अटोनोमस लेवल ३ को स्विकृति पाएको छ । यसै वर्षको पहिलो क्वाटरबाट कम्पनीले मर्सिडिज बेन्जको एस क्लास र मर्सडिज बेन्ज इक्यूएसमा यो प्रविधि प्रयोग गर्दैछ ।